नयाँ दैनिक | नेपाल कत्रो थियो र कत्रो भयो ? नेपाल कत्रो थियो र कत्रो भयो ? – नयाँ दैनिक
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालको सीमा मेची महाकालीमा खुम्चिएको हो । त्यसभन्दा अघि नेपाल पूर्वमा टिस्टा (सिक्किम) र पश्चिममा सतलज काङ्गडासम्म फैलिएको थियो ।
सन् १८०१ मा नेपाल इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच भएको १३ सुत्रीय सन्धिको वेवास्ता गर्दै अङ्ग्रेजले नेपाल अधिराज्यको सीमा क्षेत्रका ५ ठाउँमा आफ्ना सैनिक अड्डा खडा गर्यो । ४५ हजार फौज र ८३ तोपसहित उनीहरु तैनाथ भएका थिए । त्यतिबेला नेपालको फौज त्यसको आधा पनि थिएन । काङ्गडा जित्न सकिएन, आल्मोडाको पतन भयो, वम शाहले आत्मसमर्पण गरेपछि अमरसिंह थापा (पश्चिमका कमाण्डर)ले मकाहाली पारिको भूभाग अङ्ग्रेजलाई छाडिदिने पक्षमा सही गरे । त्यसपछि अङ्ग्रेजले सुगौली सन्धिका बुँदाहरु तयार गर्यो र नेपालको सीमा मेचीकाली कायम हुन गयो ।
लखनउमा स्वतन्त्रता संग्राम दबाउन नेपालको सैन्य सहयोग भारतले स्वीकार गर्यो । जङ्गबहादुर राणा सन् १८५७ जुलाई २ का दिन ६ रेजिमेन्ट फौजसहित भारत हिँडे । नेपाली फौज गोरखपुर हुँदै लखनउ पुग्यो । बाहिरी भाग हुँदै पूरै लखनउ विद्रोही सिपाहीहरुबाट पुनः अङ्ग्रेजको कब्जामा ल्याउने कामको सफलता जङ्गबहादुरलाई मिल्यो । त्यसपछि अङ्ग्रेजले नेपाललाई विशेष उपहार दिने कुरो गरे । त्यो विशेष उपहार सुगौली सन्धिमा गुमेको कालीदेखि राप्तिसम्मको भूभाग थियो । ४४ वर्ष पहिले गुमेको उक्त भूभाग १ नोभेम्बर, १८६० मा फिर्ता भयो । यसलाई नयाँ मुलुक भनियो । यसअन्तर्गत हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला पर्दछन् ।
नयाँ मुलुकसहित नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर छ । विशाल नेपाल (ग्रेटर नेपाल) को क्षेत्रफल ३,६७,५७५ वर्ग किलोमिटर थियो ।
हिजो जे भए पनि आज नेपालको सीमा २,८८९.४७ किलोमिटर लामो छ अथवा यो सीमाभित्र नेपाल रहेको छ । यसमध्ये १,१११.४७ किलोमिटर चीनसँग जोडिएको छ भने १,७७८ किलोमिटर भारतसँग जोडिएको छ । नेपाल–चीन सिमानामध्ये ७४ किमि पानी (अरुणसहित ठूला–साना गरेर १४ नदीहरु) र १,०३७ किमि जमिनसँग जोडिएको छ । भारततिर जोडिएको सिमानामध्ये १,२१३ किलोमिटर जमिन छ भने ५६५ किलोमिटर पानी (नदी र खोला) पर्दछ । यसमा साना र ठूला गरी ६० वटा नदीमध्ये मेची नदीले ८० किमि, महाकालीले २०० किमि, नारायणीले २० किमि, राप्तिले ६ किमि र अन्य नदीहरुले २५९ किमि सीमाक्षेत्रको रुपमा ओगटेका छन् ।
नेपालको पूर्व–पश्चिम लम्बाई ८८५ किमि र उत्तर–दक्षिण चौडाई १९३ किमि छ । ६० मि (झापाको केचना) समुद्र सतहदेखि ८,८४८ मिटर अग्लो (सगरमाथा) भूसतहमा नेपाल अवस्थित छ । नेपालको सिमानादेखि समुद्रदेखि पुग्न ५ सय किमि (पूर्वी नेपाल) टाढा छ ।
नेपालको आजको क्षेत्रफल १,४७,१८१ किमि हो तर यो क्षेत्रफलमध्ये कति छिमेकीहरुले हडपेका छन् भन्ने विषय नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषय हो ।
प्राकृति सिमाना जस्तै–पहाडी शृङ्खला, नदी–ताल, समुद्र किनारा आदी पर्दछन् भने कृत्रिम सिमाना मानिसले जमिनमा भौतिक हिसाबले स्तम्भ बनाएर, ढुङ्गा थुपारेर आँकलन गर्ने सिमारेखा हो ।
प्राकृतिक सिमानामा त विवाद निस्कन्छ भने कृत्रिम सिमानामा त झन् बढी विवाद आउने सम्भावना हुन्छ । अझ नेपाल–भारत जमिनमा बनेको कृत्रिम सिमाना र छिमेकीको नियत खराब हुँदा आउने समस्या र त्यसबाट पीडित हामी नेपाली भएका छौँ ।
(लेखनाथ न्यौपानेद्वारा लिखित ‘संघर्षको इतिहास’बाट)